Microsoft Security Essentials 4.3.216.0 (x86/x64) ~ လမင်းတရာ
IN Antivirus - ON 11:37 PM No comments
Microsoft Security Essentials 4.3.216.0 (x86/x64) | 10.5 MB | 12,9 MB
MSE ( Microsoft Security Essentials ) ဟာ Microsoft Windows အသုံးပြုသူတွေအတွက် Microsoft ကအလကား Free ပေးတဲ့ Antivirus ကောင်းတစ်ခုပါ.သူ့ထုတ်ကုန်Windows ပေါ်မှာအကောင်းဆုံး
အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ MSE ဟာလူကြိုက်များပြီး ကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ ရပါတယ်.. ကျွန်တော်လည်း အကြိုက်ပေါ့ဗျာ.. ကီးတွေလည်း မလိုဘူး. Update လုပ်ရတာလည်း
မြန်တယ်အဲသူ့မှာ လိုတာဆိုလို့ Windows က Geniune ဖြစ်နေဖို့ပါပဲ.. ခုတော့ နောက်ဆုံးထွက်လာ
တဲ့ Microsoft Security Essentials 4.3.216.0 Final ကို 32bit(x86) နဲ့ 64bit(x64)အတွက် ဒေါင်း
Download 32bit(x86)>>> dropbox (or) solidfiles (or) uppit (or) tusfiles
Download 64bit(x64)>>> dropbox (or) solidfiles (or) uppit (or) tusfiles
* Quarantine. Microsoft Security Essentials blocks less severe threats and moves them toaquarantined queue where you can elect to restore or permanently delete them. By placing an item in quarantine, you can test the effect of the item’s removal before deleting it from the system. * Remove. This action permanently deletes the item from the system.